Cuntada: 6 Faa'iidooyinka Shabakadda Isku duuban ee Ganacsiga
Webka xoqitaanka waa farsamada noo ogolaaneysa in aan ka soo qaadno xogta laga helo bogag internetka kala duwan iyo habka ugu fiican. Tani waxay faa'iido u tahay bilawga, ganacsatada, khabiirada warbaahinta bulshada, cilmi baarayaasha internetka, ardayda, macalimiinta, barnaamijyada, horumarinta, iyo kuwa aan barnaamijka ahayn. Bogagga shabakadda waxay xaqiijinaysaa bixinta xog tayada waqti gaaban.
Faa'iidooyinka ugu muhiimsan ee duubista webka hoos ayaa lagu sharaxay.
1. Kharashka jaban
Shaki la'aan, duubista webku waa hab aan qaali ahayn si loo helo xog la aqrali karo. Qaar badan oo adeegyo ah oo la jarayo ayaa laga heli karaa internetka, oo ay ku jiraan soo dejinta. io, taas oo kuu fududeyneysa inaad ka soo qaadato xogta laga helo bogagga boggaga la doonayo oo bilaash ah. Sidaa awgeed, xoqista ayaa badanaa ku fiicneyn bilawga iyo ardayda aan doonaynin inay lacag dheeraad ah ku bixiyaan bixiyayaasha xogta.
2. Si sahlan oo loo hirgeliyo loona daro
Marka aad dooranaysid feylka aad jeceshahay ama barnaamijka xajinta webka, waxaad ku kori kartaa ganacsigaaga oo aad ku kasban kartaa lacag badan. Tani waa sababta oo ah adeega adeegga shabakadda iyo codsiyada ayaa sahlan in lagu hirgeliyo laguna dhexgalin karo dhammaan shabakadaha internetka iyo nidaamyada hawlgalka. Waxay ku sawiraan oo ay soo saaraan bogag dhowr ah oo ka mid ah bloggaaga ama goobta oo dhan iyada oo aan wax arrin ah.
3. Dayactir yar oo loo baahan yahay iyo xawaaraha sare ayaa la hubiyaa
Mahadsanid, barnaamijyo badan oo wax lagu qoro ayaa la soo bandhigay illaa hadda. Waxay u baahan yihiin dayactir hoose ama aan lahayn dayactir iyo waxay siiyaan xog fiican oo si wanaagsan loo qaabeeyey oo si fiican loo qaabeeyey. ParseHub waa barnaamij aan u baahnayn dayactir muddo dheer waxayna u ballan qaadeysaa natiijooyin waaweyn. Adeegyada kaydinta shabakadu waxay qaadan kartaa wakhti gaaban si ay u soo saaraan xogtaada waxayna ka fiicanyihiin farsamooyinka farsamaynta farsamooyinka.
Goobta shabakadu waxay hubisaa natiijooyinka saxda ah oo sax ah, waxayna ka fiican tahay hababka xoqista buugga. Qaar ka mid ah qalabyada kaydka webku waa kuwo deg deg ah oo lagu kalsoonaan karo. Waxay bixiyaan xog faa'iido leh daqiiqado gudahood oo ha ka tagin qaladka qoraalkaaga. Soo bixinta saxda ah ee xogta waa shuruud aasaasi ah ee ganacsiyada. Haddii aad la tacaaleyso sicirka iibka ama lambarrada guryaha, waa inaad doorataa barnaamijka kaydka shabakada ama software si macquul ah.
5. Si fudud loo falanqeeyo
Qof kasta oo aan khabiir iyo waayo-aragnimo lahayn, qalab wax-soo-saarka s waa sahlan-in la fahmi karo waana la fulin karaa si habboon. Uma baahnid inaad baratid luuqado sida C ++ ama HTML si aad uga faa'iidaysato barnaamijka burburinta. Waxaa intaa dheer, xogta qalad-la'aanta ah waa la hubiyaa, iyo qaladaadka hingaadka yaryar ayaa si dagdag ah loo dhigaa, oo kuu sahlaya inaad ku falanqayso bogagga shabakadda tayada.
6. Badbaadi wakhtigaaga
Haddii aad tahay bilowga, waa inaad leedahay waxyaabo badan oo la sameeyo. Waxaad ku sii mashquulsan tahay suuq-geynta iyo kobcinta ganacsigaaga mana awoodi kartid wakhti aad ku helaysid fiirinta xogta buug-gacmeedka. Isticmaalka nooca saxda ah ee qalabka wax lagu duubo, waxaad badbaadin kartaa labada iyo waqtigaaga. Tusaale ahaan, Connotate waa barnaamij dhamaystiran oo cajiib ah oo aan ku habooneyn oo aan u baahnayn wax codsi ah oo laga soo saari karo tiro badan oo bogag ah oo aad ku heli kartid labaatan daqiiqo. Tani waa hubaal waqti-ku-badbaadin. Iyada oo nooca qalabka saxda ah, waxaad xoqin kartaa bogga oo dhan. Xogta waxaa lagu helaa qaababka la aqrisan karo oo keliya Source .